Maitiro ekuwedzera ekuwedzera kweChannel muMicrosoft Edge Chromium | Gadget nhau
Maitiro ekuwedzera ekuwedzera kweChannel muMicrosoft Edge Chromium
Ignatius Room | | Makomputa, Software
Microsoft yakatanga Microsoft Edge neWindows 10, bhurawuza rakauya nepfungwa yekuita Internet Explorer kukanganwa, bhurawuza iro akatonga neruoko rwesimbi kubva kuma 90s kunopera kusvika 2012, apo Google Chrome yakava iyo inonyanya kushandiswa mubrowser pasi kupfuura Internet Explorer.
Sezvo makore apfuura, kutonga kweChannel kwakaenderera uye kuri kuwanikwa parinenge matatu pamakomputa mana anobatana neinternet kuburikidza nebrowser. NaEdge, Microsoft yaisada kungoshandura peji neInternet Explorer, asi yaidawo simira kuChrome. Asi haana kubudirira.
Sezvo makore akafamba, Microsoft yakaziva kuti chimwe chinhu chakange chisina kumira zvakanaka. Dambudziko rakakura ratakatarirwa naEdge, isu hatina kungowanikwa mukuita kwayo, asiwo mu kushomeka kwekuwedzera. Kunyangwe chiri chokwadi kuti Edge yaienderana nekuwedzeredzwa, huwandu hweizvi hwaive hwakaganhurirwa, hushoma kwazvo kana tikazvienzanisa nenhamba inowanikwa muChannel.
Mhinduro chete yaive yekuvaka nyowani browser kubva pakutanga, nyowani yeChromium-based browser, injini imwechete iyo iripo parizvino muChrome uye Opera sezvo zvese zviri zviviri Firefox neApple's Safari zvinoshandisa Gecko.
MunaNdira 2020, Microsoft yakaburitsa vhezheni yekupedzisira yeEdge nyowani, bhurawuza iro rinopa shanduko yakakosha zvikuru kana ichienzaniswa neshanduro yapfuura. Kwete chete iyo inokurumidza, asi zvakare inotipa isu nzira dzakasiyana dzekudzivirira kuteedzera kwedu uye inoenderana nezvose zvinowedzerwa iyo yatinogona kuwana parizvino mu Chrome Webhu Chitoro.
1 Maitiro ekuisa Microsoft Edge Chromium
2 Isa zvinowedzerwa muMicrosoft Edge
3 Isa Chrome yekuwedzera paMicrosoft Edge Chromium
4 Maitiro ekubvisa ekuwedzera muMicrosoft Edge Chromium
Maitiro ekuisa Microsoft Edge Chromium
Kuva vhezheni itsva yeMicrosoft Edge, bhurawuza iro rakabatanidzwa mukati Windows 10, kana wagadzirisa kopi yako yeWindows 10. Kana zvisina kudaro, unogona kumira chete chepamutemo chinongedzo Kuti uzvitore pasi uine vimbiso izere, batanidza iyo yatinowana pane yepamutemo Microsoft peji.
Kubva pane iyi link, unogona kudhawunirodha zvese zviri zviviri vhezheni yeWindows 10, uye iyo vhezheni yeWindows 7 uye Windows 8.1 pamwe neshanduro yemacOSSezvo iyi itsva edition yeEdge ichienderana neese desktop desktop masisitimu kubva makore gumi apfuura.
Uye kana ndikati zviri pamutemo, ndinoreva kuti unofanira chenjera nemapeji ese ewebhu anoti anotibvumidza kurodha pasi Microsoft Edge kubva kumaseva avo, sekunge ndivo varidzi ve software. Tinofanira kungwarira nekuti 99% yenguva, iyo yekumisikidza software inosanganisira yechitatu-bato kunyorera iyo inozoisa kana isu tisingaverenge matanho ese ekutevera panguva yekumisikidza.
Isa zvinowedzerwa muMicrosoft Edge
Microsoft inotipa akateedzana ayo ekuwedzera ayo akaperekedza kuvhurwa kweiyo nyowani vhezheni yeEdge zvichibva paChromium, mawedzero atinogona kuwana muMicrosoft Store. Kuti uwane kubva kubhurawuza, isu tinofanirwa kuwana sarudzo dzekumisikidza nekudzvanya pamatanho matatu akatwasuka ari mukona yekumusoro yekurudyi yes browser uye kusarudza zvinowedzerwa.
Kuti uwane chikamu cheMicrosoft Store panowanikwa zvinowedzerwa kubva kubhurawuza pachayo, tinofanirwa kuenda kuruboshwe kuruboshwe tinya pa Tora zvinowedzerwa kubva kuMicrosoft Store.
Ipapo zvese zvinowedzerwa zviripo zvakananga kubva kuMicrosoft zvinozoratidzwa, izvo zvinowedzera izvo vakapfuura cheki chekuchengetedza kubva kuMicrosoft. Muchikamu chekuruboshwe, tinowana mhando dzemashandisirwo ari mukoramu yekurudyi iwo anoenderana neumwe neumwe anoratidzwa.
Kuisa chero eaya ekuwedzera, isu tinongofanira tinya pazita rayo, uye tinya bhatani Get kuitira kuti igozoisa pane yedu kopi yeMicrosoft Edge Chromium. Kamwe yaiswa, sezvazviri nezvose zviri zviviri Chrome neFirefox uye mamwe mabhurawuza anotendera kumisikidzwa kwekuwedzera, chiratidzo chayo chinoratidzwa panoperera bhaa yekutsvaga.
Isa Chrome yekuwedzera paMicrosoft Edge Chromium
Kuti tikwanise kuisa Chrome yekuwedzera mune nyowani yeMicrosoft Edge, tinofanirwa kutanga tasvika pahwindo rimwechete kubva patinogona kuisa izvo zvinowedzerwa neMicrosoft pachayo. Muchikamu chezasi chekuruboshwe chehwindo iro, isu tinofanirwa kushandura switch Bvumira kuwedzerwa kubva kune zvimwe zvitoro.
Kana tango gonesa iyi sarudzo, tinogona kuenda ku Chrome Web Store kuti uwane nekuisa izvo zvinowedzera zvatinoda kushandisa mune yedu Chromium-based kopi yeMicrosoft Edge.
Mune ino kesi, isu tichaenderera mberi nekuisa iyo yekuwedzera Netflix Party, chiwedzerwa chinotibvumidza kunakirwa zvakafanana neNetlix zvemukati neshamwari dzedu tisingagare munzvimbo imwechete. Kamwe isu tiri pane yekuwedzera peji, tinya Wedzera ku Chrome uye tinosimbisa kuiswa. Pane imwe yaiswa, tichazviwana pamagumo ebhokisi rekutsvaga. Hatidi kupinda neakaundi yedu yeGoogle kuti tiise kuwedzerwa muEdge Chromium.
Maitiro ekubvisa ekuwedzera muMicrosoft Edge Chromium
Kuti tibvise zvinowedzerwa zvatakamboisa muMicrosoft Edge, tinofanirwa kuwana sarudzo dzekumisikidza uye nekuisa iyo Chikamu cheKuwedzera. Muchikamu chino, ma extensions ese atakamboisa, kunyangwe zviri zvekuwedzeredzwa zveMicrosoft kana kuwedzeredzwa kubva kuChannel Web Store.
Maitiro ekuvabvisa kubva pakombuta yedu akafanana, sezvo isu tichifanira chete kuenda kuwedzeredza kubvisa uye tora paBvisa (iri pazasi pezita rekuwedzera) ichisimbisa kubviswa mune inotevera nhanho. Imwe sarudzo iyo Edge Chromium inotipa ndeyokumisa kuwedzera.
Kana tikabvisa kuwedzera, izvi zvicharega kushanda mubrowser yedu, chiratidzo chayo hachizoratidzwe panoperera bhokisi rekutsvaga, asi icharamba ichivapo kuti ichiitise patinenge tichichida. Iyi sarudzo yakanaka kuyedza kana paine mamwe ekuwedzera atakangoisa pakomputa yedu ndicho chinokonzera matambudziko anounzwa.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve maitiro, usazeze kuisiya mune zvakataurwa uye nekunakidzwa Ini ndichakubatsira iwe kuzvigadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Makomputa » Maitiro ekuwedzera ekuwedzera kweChannel muMicrosoft Edge Chromium
Zviwanikwa zvekugona kufona
Inoburitswa paNetflix, Disney + uye HBO yemwedzi waApril